Inkonzo yokuncedisa i-China dorpshipping kunye nearhente | Ilanga
Ukuwisa yimodeli elungileyo yeshishini abanqwenela ukuba ngoosomashishini baqale nayo kuba iyafikeleleka. Ngokulahla, unokuvavanya ngokukhawuleza izimvo ezahlukeneyo zeshishini ngecala elilinganiselweyo, elikuvumela ukuba ufunde lukhulu malunga nendlela yokukhetha kunye nentengiso kwiimveliso ezifunekayo. Nazi ezinye izizathu ezimbalwa zokuba ulahle imodeli eyaziwayo.
1. Inkunzi encinci iyafuneka
Ngokunokwenzeka esona sibonelelo sikhulu sokwehla kukuba kunokwenzeka ukumilisela ivenkile ye-ecommerce ngaphandle kokutyala amawaka eedola kuluhlu lwangaphambili. Ngokwesiko, abathengisi kuye kwafuneka babophe izixa ezikhulu zempahla yokuthenga eyinkunzi.
Ngemodeli eyehlayo, awunyanzelekanga ukuba uthenge imveliso ngaphandle kokuba sele wenze intengiso kwaye uhlawulwe ngumthengi. Ngaphandle kokubaluleka kutyalo-mali lwangaphambili, kunokwenzeka ukuba uqale ufumanise iimveliso kunye nokwazisa ishishini eliphumayo elinemali encinci. Kwaye ngenxa yokuba ungazinikeli ekuthengiseni-ngalo naluphi na uluhlu lwezinto ezithengiweyo ngaphambili, njengakwishishini lokuthengisa ngokwesiko, akukho mngcipheko umncinci ubandakanyekileyo ekuqaleni kwivenkile eyehlayo.
2. Kulula ukuqala
Ukuqhuba ishishini le-ecommerce kulula kakhulu xa kungafuneki ujongane neemveliso zomzimba. Ngokuwisa, awunakukhathazeka malunga:
Ukulawula okanye ukuhlawulela indawo yokugcina
Ukupakisha kunye nokuthumela iiodolo zakho
Uluhlu lokulandelela lwezizathu zobalo
Ukuqhubeka noku-odola iimveliso kunye nokulawula inqanaba lesitokhwe
Kuba awunyanzelekanga ukuba ujongane nokuthengwa kweempahla okanye ukulawula indawo yokugcina izinto, iindleko zakho zentloko ziphantsi kakhulu. Ngapha koko, uninzi lweevenkile eziphumeleleyo ezilahlwayo ziqhutywa njengamashishini asekhaya, efuna ngaphezulu nje kweelaptop kunye neendleko eziphindaphindayo zokuqhuba. Njengoko ukhula, ezi ndleko ziya konyuka kodwa ziya kuhlala ziphantsi xa kuthelekiswa nezo zamashishini emveli ezitena kunye nodaka.
Ishishini lokuwisa lingaqhutywa ukusuka naphi na ngonxibelelwano lwe-intanethi. Logama nje unokunxibelelana nabanikezeli kunye nabathengi ngokulula, ungaqhuba kwaye ulawule ishishini lakho.
5. Ukhetho olubanzi lweemveliso oza kuzithengisa
Kuba awunyanzelekanga ukuba uthenge kwangaphambili izinto ozithengisayo, unganikezela ngoluhlu lweemveliso ezihamba phambili kubathengi bakho abanokubakho. Ukuba abathengisi bayisitokhwe sento, ungayidwelisa uyithengise kwivenkile yakho ekwi-intanethi ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
6. Kulula ukuvavanya
Ukuwisa yindlela efanelekileyo yokufezekisa kokubini ukuvula ivenkile entsha kunye nabanini bamashishini abafuna ukuvavanya ukutya kwabaxhasi kwiindidi zemveliso ezongezelelekileyo, umzekelo, izixhobo okanye imigca emitsha yemveliso. Esona sibonelelo siphambili sokwehla kwakhona, kukukwazi ukudwelisa kunye nokuthengisa iimveliso ngaphambi kokuzibophelela ekuthengeni isixa esikhulu sempahla.
7. Kulula ukulinganisa
Ngeshishini lokuthengisa ngokwesiko, ukuba ufumana izihlandlo ezithathu kwinani lee-odolo, kuya kufuneka wenze umsebenzi ophindwe kathathu. Ngokusebenzisa abathengisi abashiya ezantsi, uninzi lomsebenzi wokuqhubekeka neeodolo ezongezelelweyo ziya kuthwalwa ngabanikezeli ngeenkonzo, zikuvumela ukuba wandise ngeentlungu ezikhulayo ezimbalwa kunye nomsebenzi ongezelelweyo owandayo.
Ukukhula kwentengiso kuya kuhlala kuzisa umsebenzi owongezelelekileyo-ngakumbi ohambelana nenkxaso yabathengi-kodwa amashishini asebenzisa isikali sokudiliza ikakhulu ngokuhambelana namashishini emveli e-ecommerce.
Qala ishishini lakho lokulahla namhlanje